तपाईँलाई ग्यास्ट्रिकले सताएकाे छ ? यसाे गर्नुहाेस्ए – दाङ खबर
तपाईँलाई ग्यास्ट्रिकले सताएकाे छ ? यसाे गर्नुहाेस्ए
एजेन्सी/समुद्री नुन प्रदूषित हुने भएकाले प्रशोधन गरिन्छ । यसरी प्रशोधन गर्दा पनि नुनमा विभिन्न विकार पदार्थ हुन्छन् । जसले शरीरमा समस्या सिर्जना गर्छ । यसको सत्तामा प्राकृतिक बिरेनुनको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसमा प्राकृतिक बिरेनुन निकै उपयुक्त विकल्प हो । उच्च हिमाली भूभागबाट संकलन गरी पूर्ण रूपमा सफा गरेर बिरेनुन तयार पारिएको हुन्छ । यसले विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई नियन्त्रण गर्नेसमेत काम गर्छ ।
Prevआइपीएल क्रिकेट प्रतियाेगीता
Nextसिमा क्षेत्रकाे सुरक्षा अवस्था
रेल आउने कहिले ? उठिबास हुने भएपछि मुक्तकमैयालाई तनाव अहिले !
हिमाली क्षेत्रहरुबीच बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपाल र चीनको साझा लक्ष्यः सभामुख महरा
जति खुल्छन्, त्यति चल्छन् रेष्टुरेण्टहरु